Axmed Madoobe “Anaga Soomaali midnimadeeda ka shaqeyneynaa ee ma noqoneyno kuwo…” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 1 August 2015 2 August 2015
Axmed Madoobe oo ka hadlayay ansixintii Dastuurka Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Maamulkiisa uu xaq u leeyahay in lagala tashto dhismahaGuddiyadii doorashooyinka iyo xuduudaha ee dhowaan ay ansixyeen Baarlamaanka Federaalka.
“Waxaa xaq u leenahay inaan nagala tashto Guddiyadii doorashooyinka iyo xuduudaha, waxyaabaha faraqa heysana ayay ka mid tahay, waxaana noqon doonaa cida ugu horeysay ee ka shaqeyn doonta sidii soomaali la isugu keeni lahaa”ayuu yiri Axmed Madoobe
Axmed Madoobe ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu aaminsan yahay Federaalka, isla markaana ay ku weyn tahay Soomaalinimada, isla markaana maamulkiisa uu gogol u fidinayo dhamaan dadka ku nool gobolada.
Waxaa uu tusaale u soo qaatay calanka suran Madaxtooyada Kismaayo oo uu xusay in kan ugu horeeyo uu yahay kan Jamhuuriyada, kan kale uu ka hooseeyo, laakiin waxaa uu xusay in haddii sida ay dowladda Federaalka sidan wax u wado ay labada calan is garab dhigayaan.
“Madaxtooyada hal calan oo kan Jamhuuriyada ayaa yaala, kan kle wuu ka hooseeyaa, haddii sidan wax ku socdaan, labada calan ayaa is bar bar dhigeynaa, waxaa idin sheegayaa in Soomaalinimada nooga horeyso Jubbaland, waxaana aaminsahaya Federaalka, sidaas darteed hadaan nahay reer Jubbaland soomaaliya midnimadeeda, walaalnimadeeda, iyo isu keenisteeda ka shaqeyneynaa”ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan ay ka dhaceyso Kismaayo doorashada Madaxtinimada Jubbaland, waxaana uu ugu baaqay muwaadin kasta ee ka soo jeeda Jubbaland uu xaq u leeyahay inuu u tartamo.
Dhinaca kale Axmed Madoobe ayaa waxaa uu mudada uu xilka haayo ugu eg tahay dhamaadka bishan Agosto, marka la eego heshiiskii Addis Ababa ee sanadkii 2013, kaasoo dhigayay in muddo labo sano uu xilka Hogaanka Maamulka KMG uu heynayo.